Amarka Gobolka ma ku baaqan doona bannaan-baxa khamiista? | KEYDMEDIA ONLINE
16 January 2022 Qarax Is-miidaamin ah oo gilgiley Muqdisho
Amarka Gobolka ma ku baaqan doona bannaan-baxa khamiista?
Maamulka Gobolka Banaadir oo ka amar qaadanaya shaqsiyaad Farmaajo u adeeega ayaa ku dhawaaqay in aan caasimadda lagu qaban karin bannaan-bax looga so horjeedo afganbigii 27 December 2021.
MUQDISHO, Soomaaliya – Sidii la filayay Maamulka Gobolka Banaadir, ayaa soo saaray amar uu ku joojinayo bannaan-bax uu “Golaha Bulshada Banaadir” iclaamiyay in dadka ku dhaqan caasimadda isugu soo baxaan 13/1/2022 oo ku began khamiista soo aaddan.
Kulan dhawaan ku soo gabagaboobay xarunta Dowladda hoose, oo ay goobjoog ahaayeen Guddoomiyaha Gobolka, qaar ka mid ah Guddoomiyeyaasha Degmooyinka iyo Saraakiisha Laamaha Amniga ee Qeybta Guud, ayaa lagu sheegay in aan la qaban karin wax bannaan-bax ah.
“Duqa Muqdisho ayaa sheegay in xilligaan Magaalada Muqdisho aysan xamili karin culeesyo hor leh iyadoona aan la aqbali doonin in Caasimada ay ka dhacaan Banaanbaxyo uusan la socon Maamulka Gobolka Banaadir”. Ayaa lagu yiri war ka soo baxay Gobolka.
Sida ay KEYDMEDIA, hore u baahisay, maamulka sare ee gobolka ayaa isku khilaafay, tallaabada laga qaadayo dibadbaxa, inta badan xubnaha sare ayaa isku raacay in mudaharaadka la fasaxo, amnigiisana la sugo, hayeeshee, shaqsiyaad uu ku jiro Cali Yare Cali, ayaa geed dheer iyo mid gaaban-ba u koray baajinta bannaan-baxa.
Kala aragti duwanaanta uu bannaan-buxu dhex dhigay maamulka gobolka, wuxuu sababay in xalay go’aan looga gaaro xaafiiska Farmaajo sida ay KON ka ogaatay xubin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir, waxaana doodda ku adkaaday darafkii diiddanaa isku-soo-baxa oo garab ka helaya Farmaajo, halka dhinac kale lagu qasbay in ay amarka kooxda Villa Soomaaliya ka socota qaataan.
Kulanka, waxaa ka qeyb galay saraakiil ciidan oo uu ku jiro Farxaan Qaroole, kaas oo hore u hor istaagay mudaharaadyo nabadeed oo Farmaajo ka dhan ahaa, tallaabada saraakiishaan ayaana durba burineysa, amarkii taliyayaasha CQS iyo shirkii GWQ ee ahaa in ciidanku ka madax-bannaanaadaan siyaasadda.
Sida uu noo xaqiijiyay sarkaal ka howl-gala xarunta Dolwadda hoose, warbixintii ay KON qortay shalay ayaa dhalisay muran iyo is-weydiin xooggan, taas oo sababtay in isla habeenimadii Isniinta ay kulan deg-deg ah yeeshaan madaxda sare ee gobolka iyo saraakiisha Amniga.
Wasiirkii hore ee Amniga Galmudug, Axmed Macallin Fiqi, oo ka mid ah musuuliyiinta qaban qaabineysa bannaan-baxa ayaa hore u sheegay in qorshuhu yahay in ugu yaraan hal malyan oo ruux ka qeyb galaan bannaan-baxa, si reer Muqdisho u muujiyaan sida ay kaga soo hore jeedaan Farmaajo iyo kooxdiisa.
Xildhiban Fiqi, wuxuu sheegay in Wasiirka Amniga uu bixiyay ruqsada mudaharadka, sidaas daraaddeed aysan jirin cid kale oo loo daba fariisanayo qabashadiisa.
Waxaa la sugayaa jawaabta ay Golaha Bulshada Banaadir iyo Wasaradda Amniga ka bixin doonaa, go’aanka maamulka gobolka Banaadir ee Farmaajo ka amar qaata.
Sidoo kale, waxaa indhaha lagu hayaa go’aanka uu Ra’iisul Wasaare Rooble ka qaadan doono amarka caburinta bulshada ah ee ka soo baxay gobolka Banaadir.